Waa maxay qareen? | Sameynta iyo daraasadaha
Waa maxay qareen?
Maria Jose Roldan | 21/05/2021 12:00 | Jaamacadda
Dad aad u tiro yar ayaa awooda inay kala gartaan waxa qareenku ka yahay looyar. Tirada qareenka ayaa ah mid ay aad u yaryihiin dadweynaha guud, in kasta oo ay leedahay muhiimad la mid ah qareenka uu yeelan karo. Labadiinaba waad isla shaqeynaysaan si muranka la isku haysto uu si habsami leh ugu socon karo.
Maqaalka soo socda waxaan kaa caawinaynaa si hadda wixii ka dambeeya aad ku ogaato inuu yahay looyar iyo maxay yihiin shaqooyinkooda ka socda garsoorka.
1 Waa maxay garyaqaan
2 Marka loo baahdo joogitaanka qareen
3 Muxuu qareenku kaga duwan yahay looyar?
4 Waajibaadka looyar
5 Waajibaadka qareenka
Waa maxay garyaqaan
Qareenku wuxuu leeyahay shahaado sharciga ah waana qofka metela qof ama shirkad maxkamada horteeda. Garyaqaanka wuxuu ku takhasusay qeyb sharciga ka mid ah sida sharciga nidaamka. Matalaada uu sameeyay qareenka waxaa lagu fuliyaa mahadnaqa awooda qareenka ee laga helay nootaayo.
Joogitaanka qareenka awgeed, waxaa la damaanad qaadayaa in xukunka laga hadlayo uu ku salaysnaan doono xuquuq sida sinnaanta dhinacyada. Tirada xeer ilaaliyaha waa mid aad muhiim u ah oo lama huraan ah iyadoo la joogin isla hal qof uusan heli karin inuu bilaabo xukun cayiman.
Marka loo baahdo joogitaanka qareen
Qareenku waa inuu goobjoog ka ahaado si qasab ah dacwad kasta oo madani ah. Iyadoo tan la tixgelinayo, tirada qareenku waxay leedahay waajibaadyo taxane ah:
Waa inaad wada shaqeyn buuxda la yeelatid la leh hay'adaha xukunka.
Difaac oo matalo macaamiisha kala duwan ee u baahan adeegyadaada.
Matala macaamiisha oo xaaladdiisa dhaqaale aysan u oggolaanayn.
Keen dukumiinti sax ah kiiska ay matalayso.
Macaamilka u baahan adeegyada qareen, Waxaad ugu baahan kartaa siyaabo kala duwan ama siyaabo kala duwan:
Diyaarinta codsi kulleejada qareenada.
Talo bixin qareen lagu kalsoon yahay.
Maxkamadda u dhiganta ayaa u baahan qareen shaqada ku jira.
Muxuu qareenku kaga duwan yahay looyar?
Farqiga u dhexeeya ayaa iska cad waana in qareenku yahay qofka masuulka ka ah difaaca macmiilkiisa. Arrinta qareenka, inu shaqee wakiil macaamiil isaguna wuxuu mas'uul ka yahay inuu xafido dhammaan dukumiintiyada looga baahan yahay nidaamka dacwadda. Garyaqaanka la dhahay waa wax aan ka badneyn shaxanka macmiilka ee maxkamada. Dhinaca kale, waxay u dhiibaysaa dhammaan dukumintiyada uu garyaqaanka u siinayo maxkamadda isla waqtigaas oo ay u gudbineyso ogeysiisyada kala duwan ee ka socda maxkamadda qareenka laftiisa.
Qasaarooyinka, tirada qareenka ayaa mas'uul ka ah inuu difaaco danaha kala duwan ee macmiilkiisa maxkamadda horteeda. Waxay si toos ah uga hawlgalaan dacwadaha kala duwan waxayna macmiilkooda kala taliyaan wax kasta oo lagama maarmaan ah si natiijada dacwadu ay noqoto tan ugu faa'iidada badan ee suurtogalka ah.
Shaqada ugu weyn ee qareenku waa inuu abaabulo dhammaan dukumintiyada lagama maarmaanka u ah macnaha guud ee dacwad gaar ah. Ma aha wax ka badan iskuxirka ay tahay inuu ka dhexeeyo maxkamadda, macmiilka iyo qareenka. Waxay mas'uul ka noqon doontaa wicitaannada kala duwan ama ogeysiisyada lagama maarmaanka u ah habka saxda ah ee maxkamad gaar ah.
Sida aad u aragto oo aad u fiirsato, tirada qareenku waa mid muhiim ah oo muhiim ah marka dacwad gaar ah la bilaabi karo oo si qumman loo wado. Garyaqaanka ayaa si wada jir ah ula shaqeeya shaxda qareenka la xiriirta arrin kasta oo dabeecad sharci ah oo u baahan joogitaankaaga.
Doorka qareenku wuxuu ku xirnaan doonaa qaybta sharciga ee uu ku takhasusay. Garyaqaan ku takhasusay shaqada ama sharciga canshuuraha la mid ma aha mid kale oo ku takhasusay sharciga guurka. Marka laga hadlayo qareenka, waa in la ogaadaa inuu kaliya ku takhasusay sharciga nidaamka uuna matali karo shaqsiyaadka iyo shirkadaha labadaba.
Marka la soo koobo, tirada qareenku waxay ku jirtaa asalka marka loo eego kan qareenka. Si kastaba ha noqotee, sidaad aragtay, qareenku waa furaha markay tahay bilaabida dacwad gaar ah iyo wax walba waxay ku socon karaan si waafaqsan sharciga. Qareenka iyo qareenkuba waa inay ka wada shaqeeyaan arrin kasta oo sharci ah oo u baahan joogitaankooda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Sameynta iyo daraasadaha » Jaamacadda » Waa maxay qareen?
Waa maxay farqiga u dhexeeya shaqaale bulsho iyo shaqaale bulsho?
5 sababood oo loo barto Darajada Cilmiga Bulshada